Apple Music yakatumira tweet paTwitter kubva kuApple | Ndinobva mac
Apple inovhimwa uchishandisa Twitter yeApple pane yayo Apple Music account
Mumakore achangopfuura, taona mangani mafemu eetekinoroji akashandisa zvishandiso zveIOS pakutumira, semuenzaniso, chimwe chinhu icho kunyangwe chiri chokwadi kuti zvinonzwisisika, zvinoda kuziva kana zvasvika pamakwikwi. Zvino, sezviri pachena, chimwe chinhu chakafanana chakaitika nguva pfupi yadarika, asi zvakapesana.
Uye ndezvekuti, zvakaonekwa kuti tweet yakaburitswa neyepamutemo Apple Music account paTwitter, yakatumirwa ichishandisa Android mutengi, izvo zvinongoda kuziva, nekuti ichi chinhu chisati chamboitika nenzira iyi, uye icho chiri kushayikwa vazhinji vevashandisi.
Iyo tweet kubva kuApple Music Twitter account yakatumirwa kubva kuApple
Sezvo isu tichangobva kudzidza, nekuda kweiyo Twitter account yeakakurumbira youtuber Marques Brownly, zvinoita sekunge kuti apfuura 2 Mbudzi, ndiko kuti, kanopfuura mwedzi wapfuura, kubva kuApple vakaburitsa a tweet paakaundi yeApple Music achipindura Ariana Grande, mukati nemoyo vakawedzera chinongedzo kune yavo albham pane Apple Music chikuva.
Nekudaro, chinhu chinonyanya kufarira nezve zvese izvi, sekutaura kwatakaita, ndechekuti kana uchiwana kuburikidza neyekuona nhare yeTwitter, zvinogona kuoneka kuti iyo tweet iri mubvunzo yakaburitswa yakananga kubva kumutengi weiyo inozivikanwa network yeApple.
Saizvozvo, isu tinofanirwa kuziva kuti, kunyangwe zvichishamisa kuti nemidziyo yayo yematanho ese, Apple yakafunga kushandisa mhando dzemakwikwi, ichokwadi kuti semuenzaniso iyo Apple Music application yeApple iripo zviri pamutemo, saka pamwe munhu anotungamira iyo account yeTwitter anga achiedza chikumbiro chakataurwa kana chimwewo chinhu chakafanana, kunyange hazvo chisingarambwe kuti hachiwanzoitika nekuti hapana aizvitarisira kusvika zvino.
Pakupedzisira, taura zvakare kuti, zvirinani izvozvi, iyo tweet haina kubviswa, kunyangwe yanga yave inopfuura mwedzi izvo zvakaburitswa, izvo zvinoita kuti tione kuti chero kubva kuApple ivo havasati vaona kukundikana izvozvi (zvinova zvinoshamisa), kana ivo vafunga kuzvichengeta nechimwe chikonzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inovhimwa uchishandisa Twitter yeApple pane yayo Apple Music account
Rangarira kuti Apple Music iri pa Android zvakare, izvo zvinogona kureva kuti iwe uedze iyo app paApple uye kunyange kushambadza kubva ipapo pasina matambudziko.
Mhoro! Sezvatakataura muchinyorwa, ichokwadi kuti iyo Android app iripo, asi zvichiri kushamisa, nekuti kazhinji Apple haitomboshandisa mutengi weIOS kuita tweet, asi inowanzo ganhurirwa kune software yevatatu veizvi, saka iri zvakare kuda kuziva 😉
Kwazisai, uye ndinokutendai zvikuru nemhinduro yako, Andrés 🙂
Kutenga AirPods kana Apple Watch kuApple mwedzi uno kwakaoma
Sid Meier's Railroads, yakagadziridzwa kuve 64-bit inoenderana